Tag: bluetooth | Martech Zone
Suuqgeynta Mobaylka: Eeg Suurtagalnimada dhabta ah Tusaalooyinkan
Talaado, July 3, 2018 Douglas Karr
Suuqgeynta moobiilka - waa wax aad maqli kartay, laakiin, macquul ahaan, waxay uga tegayaan dhabarka gubista hadda. Si kastaba ha noqotee, waxaa jira wadiiqooyin badan oo kala duwan oo loo heli karo ganacsiyada, miyaanay ahayn suuqgeynta moobiilka mid la iska indhatiri karo? Hubaal - waxaad xoogga saari kartaa 33% dadka aan isticmaalin aaladaha moobaylka halkii. Isticmaalka aaladaha mobilada ee adduunka ayaa lafilayaa inay u koraan 67% sanadka 2019, waana nahay
eMarketer wuxuu soo jeedinayaa in dadka isticmaala internet-ka kaliya ee mobilka ay ka kici doonaan min 32.1 million ilaa 52.3 million inta udhaxeysa 2015 iyo 2021 isticmaalaha desktop-ka taagan; Natiijo ahaan, waxay leedahay xaddidaadyo kuwa isticmaala moobiilka oo keliya. Hal dhinac oo muhiim ah, dabcan, waa dhaqdhaqaaqooda juqraafiyeed. Taasi waa halka otomaatiga suuqgeynta moobiilka (MMA) ay ka soo gasho.
Toddobaadkan dhammaadkiisa waxaan bilaabay wadahadal aan la yeeshay fannaan maxalli ah oo ka caawinaya saygeeda maareynta dhowr codsi oo mareeg ah oo uu leeyahay madaxdeeda. Wadahadalku wuxuu noqday mid rogrogmi kara oo xoogaa hadal qaadis ah ayaa ku saabsanaa bixinta khidmadaha horumarka toddobaadlaha ah iyadoo aan wax horumar ah laga arkin horumariyeha ay la shaqeynayeen. Hada horumariyaha ayaa doonaya inuu iyaga ka qaado lacag kale oo lacag ah si ay u dhamaystiraan mashruuca iyo sidoo kale todobaadle ah
Dhowr sano ka hor markii Bluetooth uu ku dhacay suuqa, waxaa jiray guux ku saabsan warshadaha xayeysiinta. Sidee ayey u fiicnaan laheyd in lagu dul boodo xayeysiiska taleefankaaga markaad ku dhowdahay badeecada, adeegga ama ganacsiga? Waxaan arkayaa xayeysiiyayaashu oo dhareraya hadda! Kani waa sawir aan ka helay bogga Portfolio's oo sharaxaya nidaamka. Maaddaama qof ku soo dhowaado meel u dhow barta xayeysiinta, unugga isticmaalaha 'Bluetooth'